Natasa Djukanovic Maqaallo ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by Natasa Djukanovic
Dhaqaaleyahan xagga waxbarashada ah, Natasa Djukanovic waa agaasimaha iibka iyo suuqgeynta Domain.ME, shirkadda caalamiga ah ee tiknoolajiyadda ee ka shaqeysa barta internetka ".ME." Waxay ku qaadatay shaqadeeda oo dhan isgoyska bangiyada, warbaahinta bulshada, hogaaminta iyo tikniyoolajiyadda, waxayna si joogto ah isugu dayaysaa inay ogaato sirta ku sugnaanta seddex meelood oo kala duwan isla waqtigaas.
Sida dib loogu magacdabo meheraddaada adigoon waayin taraafikada
Jimco, Diisambar 16, 2016 Jimco, Diisambar 16, 2016 Natasa Djukanovic
Shirkado badan maahan wax walba oo ay ku ogaadaan xilliga ay bilaabayaan boggooda. Taas bedelkeeda, ku dhowaad 50% ganacsiyada yaryar xitaa ma laha degel internet, iskaba daa sawir sumadeed oo ay doonayaan inay horumariyaan. Warka fiicani waa inaadan daruuri ahayn inaad si wada jir ah wax uga ogaatid fiidmeerta. Marka aad hada bilaabeyso, waxa ugu muhiimsan waa sida saxda oo ah - inaad bilowdo. Had iyo jeer waxaad haysataa waqti aad ku sameyso